को–को पुगे अस्पताल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न ? – Everest Dainik – News from Nepal
को–को पुगे अस्पताल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिचिङ अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । सोमबार बिहान साढे ४ बजे ओलीलार्इ अस्पताल पुर्याइएको थियो ।
कार्डीयोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा उत्तक कृष्ण श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको छातीमा संक्रमण र शरीरमा चिनीको असन्तुलन देखिएको बताए ।
अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य क्रमिक सुधार भएको जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै उनको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ओलीको उपचार भइरहँदा नेताहरु अस्पताल पुगेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अस्पताल पुगेका थिए । यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि प्रधानमन्त्री भेट्न अस्पताल पुगेका छन् ।
त्यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेता भीम रावल लगायत पनि अस्पताल पुगेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललगायका नेकपाका नेता, सांसद र कार्यकर्ताका साथै शुभेच्छुक अस्पताल पुगेका हुन् । अस्पतालमा ने क पाका नेता कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।
त्यस्तै ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न भन्दै भेटघाटको क्रम बढेपछि अस्पतालले त्यसमा रोक लगाएको छ । अव्यवस्थित भिडभाड बढेको र संक्रमण थप बढ्न सक्ने भन्दै अस्पतालले नेताहरुलाई समेत भेट गर्न रोक लगाएको हो ।
अहिले नेताहरुलाई पनि ओलीसँग भेट्न जान दिइएको छैन ।